RASMI: Xiddig hore ee kooxda Manchester United ah oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta – Gool FM
RASMI: Xiddig hore ee kooxda Manchester United ah oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta
(Yurub) 29 Luulyo 2019. Xiddigii hore ee kooxda Manchester United ee Patrice Evra ayaa ku dhawaaqay inuu gabi ahaanba ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta, isla markaana uu doonayo inuu ku shaqeysto xirfada tababarnimo.
Patrice Evra oo 38 jir ah ayaa u soo ciyaaray dhoowr kooxood sida Manchester United, Juventus, Monaco iyo Olympique Marseille.
West Ham United ayaa aheyd kooxdii ugu dambeysay uu u ciyaaray Patrice Evra xirfadiisa kubadda cagta, kaddib in ka badan mudo 20 sano ah, xiddiga reer France ayaa go’aansaday inuu ka fariisto kubada cagta, si uu u qabto shaqo cusub ee ah tababarnimo.
Patrice Evra ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay kubada cagta, kaddib wareysi uu ku bixiyay wargeyska reer Talyaani ee La Gazzetta dello Sport subaxnimada maanta ee Isniinta ah.
Evra ayaa yiri: “Xirfadeyda ciyaareed ee kubadda cagta si rasmi ah ayaan maanta u soo gabagabeeyay”.
“Sannadkii 2013, waxaan bilaabay inaan barto sidii aan ku heli lahaa laysanka tababbarka ee ciyaaraha BWA, haddana waxaan doonayaa inaan dhammaystiro”.
“Waxaan sidoo kale haystaa laysanka tababbarka ee UEFA, Sannad iyo bar kaddib, haddii ay wax waliba si fiican u socdaan, diyaar ayaan u noqon doonaa inaan hoggaamiyo koox walba” ayuu hadalkiisa ku soo xiray Patrice Evra.
Lampard oo si cad kaga hadlay mustaqbalka Callum Hudson-Odoi ee kooxda Chelsea
RASMI: Klopp oo ku dhawaaqay liiska xiddigaha Liverpool ee ku xaroonaya xerada tababarka ee France... (Miyey ku jiraan Saalax iyo Firmino?)